Gudoomiyaha G/Sh/Hoose oo kormeeray mashaariic laga hirgelinayo degmada Afgooye+Sawirro – Radio Muqdisho
Gudoomiyaha gobolka Sh/Hoose ayaa maanta kormeeray goob laga dhisayo xarunta cusub ee uu ku shaqeeyndoono maamulka gobolkaasi.
Mudane Ibraahim Aadan Cali “Najax” waxaa kormeerka ku wehlinayay gudoomiye ku xigeennada amniga iyo maaliyadda gobolka Shabellaha hoose gudoomiyaha degmada Afgooye iyo saraakiisha ciidanka.
Mas’uuliyiinta gobolka Shabellaha hoose ayaa kormeer ku tagay dhul banaan oo laga dhisayo xarunta maamulka gobolka Shabellaha hoose suuqa xoolaha degmada Afgooye oo dhawaan mamulka gobolka uu burburin ku sameeyay kadib dhismooyin sharcidarra ah oo suuqa laga dhisay iyo saldhigga Policka degmada Afgoye oo maamulka gobolka iyo kan degamda ay dayactir ku sameynayaan.
Gudoomiyaha degmada Afgooye Cabdi naasir Caalim Macalin ayaa Mamulka gobolka shbellaha hoose uga mahadceliyay dib u dhiska ay degmada ka wadaan.
Gudoomiyaha gobolka Shabellaha hoose Ibraahim Aadan Cali “Najax” ayaa sheegay in maamulka gobolka shabellaha hoose uu bilaabayo dhismaha xarun uu ku shaqeeyo maamulka gobolka isagoo mamulka degmada Afgooye ku boorriyay sugidda amniga iyo horumrinta bulshada.
Maamulka gobolka Shabellaha hoose ayaa mudooyinkii danbe waday mashaariic lagu horumarinayo degmooyinka gobolka.